आजको राशिफल : २०७७-चैत २ गते सोमबार - Tulsipur Online
आजको राशिफल : २०७७-चैत २ गते सोमबार
Posted by News Desk | २ चैत्र २०७७, सोमबार १०:१२ |
आज मिति२०७७/१२/०२ गते सोमबारतदनुसार १५ मार्च २०२१,फाल्गुन शुक्ल पक्ष द्वितीयातिथि वेलुका १७ . ४९ वजे सम्म । आजको नक्षत्र रेवती राति २७ .५३ वजेसम्म।
मानसिक तथा शारीरिक समस्याले सताउने छ । धनक्षय हुने दिन रहेको छ । बहुमुल्य सामान हराउन सक्नेछ । काममा बाधा व्यवधन आउने छ । कुरा काट्नेहरु प्रसस्त भेटिनाले अपयश मात्र हात लाग्ने छ । अध्ययनमा मन जानेछैन । अनावश्यक यात्राहरु हुनेछन् । व्यवसायमा घाटा होला ।
आर्थिक उन्नति प्रगतिहुने दिन रहेको छ । पराक्रम बढने तथा काममा सफलता मिल्नाले मन प्रसन्न रहनेछ । इष्टमित्रसंग भेटघाट हुनेछ । यात्रा तथा धनलाभहुने दिन रहेको छ । व्यवसायबाट फाइदा हुने दिनछ । आफन्तबाट प्रसस्तमात्रमा सहयोग प्राप्त हुनेछ । अध्ययनको क्षेत्र सफल रहनेछ ।
आज कुनै नयाँ कामको थालनि हुनेछ । आज ऐश्वर्य प्राप्त हुनेछ । मनले चिताएको काममा सफलता मिल्ने योग छ,इष्ट सिद्धि हुनेछ । रोकिएका कामहरु पुराहुनेछन् । तिव्रतापूर्वक काम गर्दा वेस हुनेछ । कर्मको फल प्राप्त हुनेछ । विद्यार्थी तथा व्यापारीहरुका लागि आजको दिन विशेष फलदायी रहनेछ ।
धनलाभ हुने दिन छ । यात्रा तथा सवारीसाधनबाट फाईदा हुनेछ । मीठो कुरा खानपाईने दिन रहेको छ । मित्रबाट पूर्ण सहयोग मिल्नेछ । परिवारबाट सहयोग मिल्ने छ । व्यवसायबाट प्रसस्त आमदानी हुने दिन रहेको छ । मान प्रतिष्ठा बढ्ने योग छ । पढाइमा सफलता मिल्ने दिन रहेको छ ।
व्यवसायबाट फाईदा हुनेछ । स्वास्थ्यले साथ दिनेछ । श्रीवृद्धि तथा यश प्राप्त हुनेछ । शत्रु सरास्त हुनेछन् । विपरीत लिङ्गसंगको कुराकानिले मन साह्रै प्रसन्न हुनेछ । मनले चिताएको काम पुरा हुनेछ । प्रेममा सफल हुने दिनछ । विद्यार्थीका लागि अध्ययन क्षेत्र फलदायी रहेका छन् ।
धनक्षय(अपव्यय) हुनेछ मेहनतसाथ गरेको काम सफल हुनेछैन । यात्रा अर्थपूर्ण नहोला । मन अशान्त रहनेछ । धन तथा सामान हराउन सक्नेछ सजगता अपनाउनु होला । व्यापार व्यवसायबाट त्यति आम्दानीहुने छैन । विद्यार्थीहरुका लागि आजको दिन त्यति फलदायी हुने छैन ।
धन आर्जनगर्ने अवसर मिल्नेछ । शत्रु परास्त हुनाले मन प्रशन्न हुनेछ । मित्रहरुको साथ र सहयोग प्राप्त हुने छ । प्रेममा सफल हुने योगछ । उपहार प्राप्त हुनेछ । आजको दिन सुखद् तथा प्रेमिलरुपमा व्यतित हुनेछ । विद्यार्थी भाइबहिनीहरुका लागि आजको दिन राम्रो रहेको छ ।
स्वास्थ्य राम्रो रहने छ । मनमा सुखको अनुभुति हुनेछ । सभा तथा समारोहमा सहभागि हुने अवसर मिल्नेछ । पारिवारीक सुख प्राप्त हुने छ । स्वादिष्ट भोजन तथा उपहार प्राप्तहुने योग रहेकोछ ।. अन्नलाभ हुनेछ । विद्यार्थीहरुको अध्ययनको क्षेत्र राम्रो रहनेछ । व्यवसायवाट प्रसस्त आम्दानी होला ।
उप–प्रा. नेपालसंस्कृत विश्वविद्यालय
सिद्धान्त ज्यौतिषाचार्य,वास्तु तथा फलितविद्
ज्यौतिष परामर्श केन्द्र
वेष्टर्न डेभलोपमेन्ट बैक संग सटेको घरमा
भेटने समय :– विहान ०६–०९ः३०,दिवा ०२–०६
Previousरनिङ शिल्डको उपाधि विरेन्द्र माबीलाई
Next३ दिनसम्म मेघगर्जन सहित पानी पर्ने सम्भावना